Ezokuphepha, ukuphepha kanye nobumfihlo be-Banking Offshore & Ongabheka
Ukuphepha kwe-Offshore Ukuphepha nokuvikeleka
Ibhange lase-offshore kuzwakala njengomqondo obekelwe abacebile ngokweqile. Iqiniso ngukuthi liphephe kakhulu futhi lilula kunaleyo umuntu ojwayelekile ayikholelwe. Manje-ke kuyini ngamabhange aphesheya kwezilwandle adonsela abantu kuwo? Nokho, lapho ucwaninga ngempendulo uzothola ukuthi akuyona into exakile njengoba ubucabanga. Ama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle anikeza izinzuzo eziningi ngaphezulu kwebhange lasekhaya. Amabhange amaningi aphesheya anikeza ukuphepha okukhulu, ubumfihlo obukhulayo nenkululeko enkulu yezimali nokuvumelana nezimo ukwedlula amabhange asekhaya. Lo mthombo osizayo uzokunikeza ngezeluleko ezithile, izinkomba nokuqonda kuleli thuba.
Yini i-Offshore Banking?
I-Offshore banking njengoba izwakala nje. Kuyinto yasebhange esikhungweni sokugcina imali esingaphandle kwezwe okuhlala kulo idiphozi. I-Offshore banking ayigcini nje emazweni amancane afana neBelize, amaCaymans, neCyprus. Kubandakanya namazwe anjengeChina nezwe laseYurophu, kubandakanya iSwitzerland, iNetherlands neBelgium phakathi kwamanye. Izwe ngalinye linemithetho yalo elawula indlela asebenza ngayo amabhange awo. Kepha ekugcineni bavame ukufeza izinto ezifanayo. Lokhu kufaka phakathi indawo elawulayo esiza ukuphepha nokuphepha kwebhange. Futhi, basebenzisa uhlelo olufanele lokukhuthala ukusiza ukukhipha abantu ababi.
Kungani i-Offshore yaseBhange?
Ngakho-ke ingabe ukubhanga ngaphandle kwezwe lakho kukuhlinzeka ngezinzuzo?
Impendulo yalowo mbuzo ingu-yebo, kukhona izinzuzo eziningi zokuvula i-akhawunti yasebhange engaphesheya. Enye yezinzuzo ezibaluleke kakhulu futhi ezibaluleke kakhulu zokubhanga kude nolwandle ubumfihlo. E-United States, ngokwesibonelo, kunemithetho efana ne-US Bank Secrecy Act ye1970. Kamuva kwavela i-USA PATRIOT Act. Benza ukuthi ubunikazi babo bonke abanikazi bama-akhawunti asemabhange asekhaya kube lula kakhulu ukubathola. Lokho kwenza ubumfihlo bebhange emabhange endawo cishe abukho.
Imithetho yebhange yase-offshore emazweni amaningi, ngokuphambene, yibamba ubumfihlo yabaphathi bama-akhawunti abo ngokubheka okukhulu. Ngakho-ke, amabhange aphesheya kwezilwandle ezindaweni eziningi awanaso isibopho sokudlulisela ubunikazi be-akhawunti kunoma ngubani ovela eceleni. Kunokuhluka okuthile, yiqiniso, njengezindaba ezingathi sína zobugebengu njengobushokobezi, ukushushumbisa, noma ukuphanga imali. Leli zinga lobumfihlo emabhange aphesheya kwezilwandle alisiyo nje imboni yezimboni. Kepha kukhona umthetho emazweni amaningi agunyaza ubumfihlo kanye nobumfihlo babanikazi bama-akhawunti. Lokhu kulungele abantu abanezimpahla abafisa ukuzivikela ekuqulweni kwecala likahulumeni.
I-Offshore Banking ye-Protectionsuit Protection
Ngokusho kweAmerican Bar Association e2006 i-United States yayiyikhaya labameli abangaphezu kwesigidi. Ngaphezu kwalokho, amasudi omphakathi akhuphuke i-12% kusuka ku-1993-2002. Namuhla, i-United States inabameli abaningi emhlabeni. Ngokukhethekile, i-80% yabameli bomhlaba abaqhuba e-US. Iphinde ibe nobuningi bayo bezomthetho. Empeleni I-US ine-96% yokwahlulela kwezomthetho zomhlaba. Eziningi zazo ziyingqayizivele emvelo. Lokhu kufanele kwenze ukuvikela izimpahla zakho zibe yizinto ezibalulekile.
Njengoba abantu abaningi bazi, icala elincane, noma kungamanga aluhlaza ceke, lingalimaza kakhulu impilo yomuntu ngokwezezimali. Lokhu kunjalo ukuthi ngabe icala liyaphumelela noma cha. Imali ekhokhwayo umuntu ayidingayo ukuvikela icala ingaba yimbi. Ngenxa yalokhu, kuvame ukushibilika ukuphonsa ukukhokhwa kwemali kummangali ukwenza icala lingasuki. Ngokufaka impahla yakho kwi-akhawunti yasebhange engaphesheya kwezilwandle uvikela izigqila zabameli abanonya kanye namacala abambekayo. Lokhu kungenxa yokuthi akuzona kuphela izimpahla zakho ezisesigabeni esihlukile kunaleso ohlala kuzo. Kepha imithetho yobumfihlo eqine kakhulu ilawula amabhange.
Izinga lokuvikelwa kwempahla nobumfihlo okunikezwa ngama-akhawunti asebhange lolwandle lubaluleke kakhulu. Lokhu kuyinto enkulu kubaninimabhizinisi abafisa ukuvikela izinto abazitholile. Kukhona inhlanganisela yobumfihlo obuqinile bebhange nokuphathwa kwezimpahla ngaphansi komthetho okunzima ukufinyelela kuyo. Lezi zingqinamba ezimbili zingaqeda amandla abameli abaningi abalandela amacala ngawe. Lokhu kungenxa yobunzima obukhulu bokuthola "izindawo zokuhlala ezikhokhelwayo."
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukuvikelwa kwempahla akutholwa kuphela nge-akhawunti yasebhange engaphesheya. Isizathu salokhu. Uma ubambe i-akhawunti uqobo, ijaji lingakuyala ukuthi ubuyise imali kwi-akhawunti yakho yaphesheya. Uma umuntu ogqoke ingubo emnyama ebambe i-gavel enikeza umyalo, angakucindezela ukuba wenze njalo.
Ingabe ukuvikelwa ezinkingeni zomthetho kubalulekile kuwe? Uma kunjalo, ukubamba kubambe i-akhawunti ethembeni lokuvikela impahla n phesheya ephethe ilayisense elinamalayisense kubalulekile. Okusho ukuthi, bamba imali ngaphakathi kwokwethemba kwakho, ugadwe ngumphathi onelayisense, onomshuwalense, onedumela elihle. Lokhu kungenxa yokuthi lapho wenza kanjalo uphendulela amatafula. Umphathi uhlala phesheya kwezilwandle. Ngakho-ke, ijaji lendawo alinawo amandla okuphoqelela abaphathi bakwamanye amazwe ukuba bathobele.
Kunezinzuzo ngokungezelela ekwandeni kobumfihlo. Ama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle anikeza nenkululeko enkulu kunama-akhawunti asebhange asekhaya enza. Ama-akhawunti wasekhaya angakuvimbela ukuthi uhlanganyele ezinsizakalweni ezithile zokuphathwa kwengcebo. Kepha amabhange amaningi aphesheya kwezilwandle angavula la mathuba wezezimali azuze inzuzo futhi azuzayo. Kunesizathu esisodwa esikhulu ukuthi la mathuba wokutshalwa kwezimali ayatholakala emabhange akude nolwebhizinisi lawo. Kungenxa yokuthi kuncane kakhulu ukungenelela kukahulumeni ezindabeni zamabhange ezifundeni eziningi.
Nge-akhawunti yasebhange engaphesheya ungajabulela izinzuzo zokusebenzisa imali yaphesheya. Ungakwenza lokho ngohlobo lwemali oluhlukile. Futhi ungathola amanani wokushintshana angcono kulezo zezimali. Ukuthola i-akhawunti yasebhange engaphesheya kuvula amathuba webhizinisi angatholakali ezindaweni ezithile. Ngakho-ke, amabhange angaphesheya kwezilwandle avumela ukuthi kube lula ukutshala imali ezimakethe ezivelayo nakumazwe asathuthuka. Lokhu kuvame ukuvumela abatshalizimali ukuthi bathole imbuyiselo engcono ezitshalweni zabo kunalokho abangakuthola ekhaya. Kukhona amanye amathuba okutshala imali namabhizinisi kwamanye ama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle. Lokhu kungafaka ukubamba iphothifoliyo yemakethe yesitoko kanye / noma izinsimbi ezibalulekile. Ngaphezu kwalokho, kaningi lapho kunikeza khona inzalo enhle evumayo abayinikeza abanikazi bama-akhawunti abo.
Yini ephephile? Amabhange ase-US noma amabhange ase-Offshore?
Enye inzuzo etholakala ngokuba ne-akhawunti yasebhange lolwandle ukuthi ezindaweni eziningi amabhange azinzile impela. Manje sengikwazi ukuthi kungenzeka ucabangani manje: “Kungenzeka kanjani lokho?” Iqiniso elisobala lendaba ukuthi phakathi kwe2008 ne2012, bekukhona amabhange e-465 ase-US ahlulekile. Ngaphezu kwalokho, ukuhlaziya okwenziwe minyaka yonke okujulile okwenziwa yiGlobal Finance kukutholile lokhu. Of amabhange aphephe kakhulu e-50 emhlabeni kuphela amabhange amathathu (3) ase-US enza uhlu. Kwakungekho ngisho nebhange elilodwa lase-US emabhange aphephe kakhulu e-30. Akekho noyedwa. Ngokwalolu hlu, amabhange aphezulu e-10 aphephe kakhulu emhlabeni wonke atholakele eYurophu.
Manje lokhu akusho ukuthi imboni yasebhange lase-US isezingeni lokufakwa. Okusho ukuthi, ukwehla kwezomnotho akulungile neze ekhoneni. Lezi zibalo zibonisa nje ukuthi kunamazwe aphesheya kwezilwandle ahlinzeka ngokuqina kwebhange ukwedlula i-US. Lokhu kuvame ngokusebenzisa imithetho yasebhange edinga amashidi wokulinganisela aqine. Futhi eziningi zalezi zikhungo zinikeza ukubuyiselwa okungcono kubanikazi bama-akhawunti futhi zinikezela ngohlu olubanzi lokutshalwa kwemali. Leli zinga lokuqina livumela abanikazi be-akhawunti ukuthi bahlukanise amafa abo. Kubanikeza nethuba lokuvikela kangcono lezo zimpahla nokuqapha ubumfihlo babo bezezimali.
I-Offshore Banking Simplicity
Ekugcineni, abantu abaningi banombono wokuthi ukuthola i-akhawunti yasebhange engaphesheya kuyinqubo ende, enzima, futhi eyinkimbinkimbi. Bacabanga ukuthi ligcinelwe abambalwa kuphela; kulabo abakwazi ukukhokha abameli abanoxabiso oluphezulu nezimali zokusetha ama-akhawunti aphesheya kwezilwandle. Lokhu kungenzeka kube njalo emashumini eminyaka edlule lapho ukusetha ama-akhawunti asemabhange aphesheya kwakunzima kakhulu. Ngaphezu kwalokho, bekubiza kakhulu ngenxa yesidingo sokuya ebhange. Kepha kwabe sekuzalwa unyaka wedijithali kanye nokusetshenziswa kwamakhompiyutha axhunywe kwi-inthanethi. Ngakho-ke, namuhla, ukuthola nokubheka ama-akhawunti asebhange aphesheya cishe kulula njengokusebenzisa ama-akhawunti asebhange asekhaya.
Kulolu suku nobudala nje cishe yimuphi umuntu omdala angafaka isicelo se-akhawunti yasebhange engaphesheya. Kuyindaba elula yokuxhumana nesingenisi esifanelekile njengenhlangano yethu. I-inthanethi isuse ukungabandakanywa kwama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle. Kwenze kanjalo indawo lapho wonke umuntu angafaka khona isicelo. Cishe noma yimuphi umuntu angagcina i-akhawunti ngaphandle kokukhokha imali enkulu kakhulu yezomthetho kanye neyokucubungula kubameli. Futhi asikho isidingo sokuhamba uya endaweni yebhange elingaphesheya ezindaweni eziningi. Izinsizakalo ezihlinzekwa ngamabhange aphesheya kwezilwandle manje sezifinyeleleka cishe kuwo wonke umuntu. Ngakho-ke, kulula kakhulu ukufaka isicelo se-akhawunti yasebhange engaphesheya futhi uthole izinzuzo kunokuba umuntu ecabanga.
I-Offshore Banking: Yenzelwe wena?
Ama-akhawunti asebhange ase-Offshore azungezwe i-mystique eningi emashumini ambalwa eminyaka adlule. Umuntu ojwayelekile ukholelwa ukuthi amabhange agcina lezi zinzuzo kubantu abacebile kuphela. Njengoba kunje, bayabona ukuthi zonke izinzuzo ezingabakhona zenzelwe lo omunye umfana. Leyo ngenye inkolelo esikujabulelayo ukusho ayilona iqiniso. Zikhona izinzuzo zakho, futhi.
Izinzuzo zobumfihlo, ukuvikelwa kwempahla, ukuqina kwesikhungo, kanye nokuvumelana nezimo emabhange aphesheya kwezilwandle ayatholakala kuwo wonke umuntu. Ingabe ungumnikazi webhizinisi ofuna ukuvikela impahla yakhe yebhizinisi? Ingabe ungumuntu ofuna ukungena emathubeni wokutshala imali enenzuzo ezimakethe zangaphandle? Uma kunjalo, ochwepheshe abaningi bokuvikela impahla bacebisa ngokuqinile ukufuna ukuthola i-akhawunti yasebhange engaphesheya.
Ubumfihlo be-Offshore Banking nokuphepha
Ubumfihlo nokuphepha kwebhange kuyinkinga enkulu. Kusemqoka ukuthi wena nemali yakho niphephe. I-OnshoreCompany.com incoma njalo izikhungo zebhange ezibamba iqhaza ohlelweni oluphakathi lwamabhange. Uhlelo lulawulwa kakhulu. Isebenzisa izindlela zokubalwa kwezimali ezilukhuni, ezinikezela ngengqalasizinda enamandla nokuqapha okuzimele kwamabhange asekhaya angaphesheya kwezilwandle.
Izikhungo eziningi zihlinzeka ngama-akhawunti asebhange aphephile nawangasese asezitolo ezinkampanini zaseMelika nezangaphandle kanye nezikhulu zikahulumeni wasekhaya. Izikhungo zikhipha umsebenzi futhi zisekela umnotho wasekhaya. Lokho wukuthi, umnotho wabo uncike emkhakheni wezinsizakalo zezezimali. Ngenxa yalokhu, imithetho yobumfihlo neyokuphepha kwezezimali iyinde futhi izinzile. Kubalulekile ukuthi wonke amakhasimende angahle enze ukukhetha okulungile kwegunya. Senza ucwaningo oluningi kwabanikezeli bama-akhawunti asemabhange aphezulu. Ngaphezu kwalokho, siyajabula ukukunikeza imininingwane ewusizo ukukusiza ekwenzeni isinqumo esifanele.
Amabhange aphesheya kwezilwandle kwamanye amazwe abamba iqhaza ezinhlelweni zomshuwalense zokuvikelwa kwezezimali ezinikezwe amandla. Bathatha kakhulu ukuphepha nobumfihlo. Abalawuli basebenza ngamandla ukuphepha kwasebhange lolwandle. Basebenza ngamandla izimiso. Okusho ukuthi, umthetho ubeka imigoqo ukuthi amabhange wolwazi abelana ngani nabantu besithathu, kubandakanya nohulumeni bangaphandle. Ngokwemvelo, imithetho ivumela abahlinzeki be-akhawunti yasebhange phesheya ukuba babelane ngemininingwane ezimweni zobulelesi ezinzima noma zobuphekula. Abathathi kalula ubumfihlo bebhange.
Ubumfihlo be-Swiss Banking
Isibonelo, eSwitzerland, umthetho ujezisa kanzima noma yisiphi isisebenzi esephula ubumfihlo bekhasimende. Lokhu kufaka inhlawulo elukhuni nesikhathi sasejele. Ngakho-ke, bathatha ubumfihlo be-depositor kakhulu. Kubalulekile futhi ukuthi ibhange langaphandle lingenalo igatsha lasekhaya. Lokhu kungenxa yokuthi igatsha lasekhaya lingahlawuliswa inhlawulo kuze kube yilapho igatsha lakwamanye amazwe selikhokha imali. Yimaphi amabhange anenhlanganisela engcono kakhulu yezokuphepha, ukuphepha, ukufinyelela i-inthanethi nokwamukela obala amaklayenti angaphandle? Yilapho inkampani enjengalena ingena khona. Sebenzisa inombolo noma ifomu kuleli khasi ukuthola usizo.
Nazi ezinye iziphathimandla ezizimele zezimali ezizimele:
I-Channel Islands (eJersey naseGuernsey)
I-OffshoreCompany.com usungule ubudlelwano obude obukhona namabhange asogwini. Senza ukubuyekezwa njalo, inkuthalo efanele kanye nemihlangano yomuntu siqu. Ukwenza lokhu kusiza ekuqinisekiseni ukuthi ama-akhawunti asebhange elingaphesheya esisiza amaklayenti ukuthi awasungule kungenzeka aphephe futhi aphephile. Finyelela kithi ukuthola eminye imininingwane noma ukuvula i-akhawunti ebhange elivikelekile lolwandle.